420 ချက်သမ္မတနိုင်ငံမော်ကွန်း - ထို rayhab
နှစ်ဦးအားရထားချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက် Head to Head ကွဲသွားရင်!
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏အရှေ့တဦးတည်းခရီးသည်တင်ရထားဦးခေါင်း-to-ဦးခေါင်းနှစ်ခုရထားတိုက်မိ။ ခကျြခကျြမီးရထားလူတစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာကြောင်းလွန်ခဲ့သည်ကနဦးတိုက်မှုသည်နှင့်အညီတဦးတည်း6ကလူ, ပတေရု Shtyaglavsky ပြုတဲ့ကြေညာချက်စာနယ်ဇင်းအတွင်းရေးမှူးအတွက်yaralandığnကဆိုသည်။ Shtyaglavsky, ရထားတဦး [ပို ... ]
21 / 12 / 2016 Levent Ozen 0
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့တရုတ်လုပ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားအီးယူဈေးကွက်ထဲဝငျ: မြန်နှုန်းမြင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူမကြာမီပရာ့ဂ်၌အချက်သမ္မတနိုင်ငံမတိုင်မီ CRRC လေ့ပုဂ္ဂလိကရထားလမ်းကုမ္ပဏီအဘိဓါန် Lou Express ကိုအတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးစာချုပ်နှင့်အတူ, [ပို ... ]
ပိတ်ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Rihanna သူငယ်ချင်းများမှဓါတ်ရထား
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Rihanna သူငယ်ချင်းများကိုပိတ်ရန် Tram မှခဲ့ကြသည်: ချက်သမ္မတနိုင်ငံအားလပ်ရက်၏မြို့တော်ပရာ့ဂ်ကမ္ဘာ့ကြယ်ပွင့် Rihanna, နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဖို့လမ်းရထားသဖြင့်မြို့တမြို့ခရီးစဉ်, မိမိကိုမိမိနှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကများအတွက်လမ်းရထားနီးစပ်ခဲ့သော။ မြို့ခရီးစဉ်ကျော်ကြားအရက်သောက်ရှမ်ပိန် assign [ပို ... ]
လေထုထဲသို့လေတိုက်ပစ်ရထားလူငယ်အချို့: လေတိုက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းနှစ်ခုလုလင်တို့သည်နီးပါးစာရွက်တစ်ရွက်နဲ့တူလျှော့ချခဲ့သည်။ အဘယ်သူသည်သူလူငယ်တစ်ဦးအသေခံရာမှပြန်လာသောချက်သမ္မတနိုင်ငံ2အတွက်ပုဒ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းကိုပြောင်းရွှေ့ချင်တယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်ကနေအစာရှောင်ရထား၏သောကြောင့်, လူငယ် [ပို ... ]
Arriva, ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ဆလိုဗက်ကီးမီးရထားတောင်တက်အတွက်စတင်: ရောက်ရှိကုမ္ပဏီဥရောပဘတ်စ်ကားနဲ့ရထားပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကြီးဆုံးအော်ပရေတာများ၏တဦးတည်း, ချက်သမ္မတနိုင်ငံသည်နှင့်ဆလိုဗက်ကီးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးစတင်ခဲ့သည်။ ပရာ့ဂ်အဓိကဘူတာမှ Benesov ဦး Prahy ထက်ဝက် [ပို ... ]
ယာဉ်မောင်းစမ်းသပ်ခြင်း Start မှချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ခရီး EVO1 လမ်းရထားအဖြစ်: ချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဟာပေါ်လာတာဟာအရင်မောင်းစမ်းသပ်ဖို့ခရီးပရာ့ဂ်မြို့အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်တွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်စတင်ခဲ့သည်။ EVO1 လုံးဝပြည်တွင်းမှာပရာ့ဂ် 5,6 အတွက်မြို့ပြလမ်းရထားလိုင်းကို၏လမ်းရထားထုတ်လုပ် [ပို ... ]
အဆိုပါမီးရထားများအတွက်အသစ်သောစက်ခေါင်း၏ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ CZ Loko အခမ်းအနားရိုက်ထည့်ဖို့ဇန်နဝါရီလ 28 အတွက်အသုံးပြုသူကိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမီးရထားအသိအမှတ်ပြုခံရနယူးစက်ခေါင်းများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ CZ Loko စုစုပေါင်းအရေအတွက်က 20 741.7 အတန်းအစားဒီဇယ် [ပို ... ]
interp လျှပ်စစ်ရထားဝန်ဆောင်မှုချက်သမ္မတနိုင်ငံထုတ်ပေးခြင်းစတင်: ချက်သမ္မတနိုင်ငံမီးရထား (CD ကို) အသစ်တခုမော်ဒယ်လျှပ်စစ်ရထားသူတို့ရဲ့ interp 660 မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ခကျြခကျြမီးရထားအားဖြင့်သြဂုတ်လအတွင်းကအမိန့်ချမှတ်သည့် 2014 လျှပ်စစ်ရထား၌က Skoda ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် xnumx'l ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့ [ပို ... ]
အဆိုပါထရပ်ကားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြန်နှုန်းရထားများပြား (ဗီဒီယို) ၏ယာဉ်မောင်း
အဆိုပါထရပ်ကားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြန်နှုန်းရထားများပြား၏ယာဉ်မောင်း: မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပေါ်တွင် TIR ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့တန်းဖြတ်ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ပျက်ကျသွားသည်။ Truck ကားဒရိုင်ဘာမတော်တဆမှုငြိမ်ဝပ်စွာအခွင့်အလမ်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်တစ်ဦးအဆင့်ကိုကူးမှာကျွန်မတံခါးဝ TR ရိုက်ထည့်, [ပို ... ]
နောက်ဆုံးထရပ်ကားများတွင်အနီရောင်ရထားဘွတ်ကင်တစ်ဝက်-အလင်း: ရထားချက်သမ္မတနိုင်ငံကိုခှဲဝေကျမ်းပိုဒ်များတွင်အနီရောင်အလင်းမှာထရပ်ကားဖြတ်သန်း။ Truck ကားဒရိုင်ဘာ, မတော်တဆထိခိုက်မှုအနည်းငယ်ဒဏ်ရာရအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဗဟိုဥရောပနိုင်ငံတွေ, ချီတက်ပွဲအတွက်ထရပ်ကားထဲမှာချက်သမ္မတနိုင်ငံ Frydek Mistek [ပို ... ]
ချိတ်ဆက်ခြင်းပရာ့ဂ်မြို့တော် Center ကလေဆိပ်
ပရာ့ဂ်မြို့တော် Center ကလေဆိပ်ဆက်သွယ်နေကြသည်: ချက်သမ္မတနိုင်ငံစနစ်ချိတ်ဆက်မည်လေဆိပ်ရထားလမ်းနှင့်အတူပရာ့ဂ်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ပို့ဆောင်ရေး Vaclav Havel ဝန်ကြီးဌာနအဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ ရှည်လျားသောပြီးနောက်လိုင်းများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုအားဖြင့် SZCD ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ [ပို ... ]
ပရာ့ဂ်အတွက်လုပ်ဖို့နယူးက Metro လိုင်း
နယူးက Metro လိုင်းပရာ့ဂ်အမှုကိုပြုခံရဖို့: ချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ပရာ့ဂ်အားအသစ်သောမက်ထရိုလိုင်းကိုယ်စားကြေညာချက်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ ပရာ့ဂ်မက်ထရို၏မြို့တမြို့ကောင်စီဖြင့်ကြေညာချက်အရ, ထို့နောက် B နဲ့ C ကလိုင်းများ D ကိုလိုင်းလုပ်ခံရဖို့ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဤ [ပို ... ]
အစာရှောင်ခြင်းရထား Truck ကားချက်သမ္မတနိုင်ငံကူးထားပါတယ်
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အစာရှောင်ရထားကုန်ကားဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်: ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, level ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တော်အရှေ့ဖို့ထရပ်ကားအတွက်လူနှစ်ဦးက high-speed ကိုရထားသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုရလဒ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလေ၏။ မီးရထားကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ Sözcüမိမိအထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ Drapala ့မာတင်, မြို့ Studenka အတွက်ကျမ်းပိုဒ်နံနက်များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းတန်းဖြတ် [ပို ... ]
နောက်ထပ်သမ္မတ Park ကချွေ Geun-hye ကနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဆိုးလ်ခကျြဝန်ကြီးချုပ် Sobotka Bohuslav ရဲ့ယနေ့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းနိုင်ငံရေးနှင့်အခြားဒေသများတောင်ကိုရီးယားရဲ့မြို့တော်အတွင်းမီးရထားလမ်းခေတ်မီတံ့သော၏တောင်ကိုရီးယားချက်သမ္မတနိုင်ငံ [ပို ... ]
ခကျြခကျြတရုတျဖက်စပ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်နိမ့်ကြမ်းပြင်လမ်းရထားထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်: နိုင်ငံတော်ကုမ္ပဏီ, တရုတ်မီးရထား Signal & ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (တရုတ်မီးရထားလိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ) (66%), Xiangtan လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအုပ်စုကော်ပိုရေးရှင်း (Xiangtan လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း Group ကုမ္ပဏီ) (% 17 ) [ပို ... ]
ခကျြခကျြမီးရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (ဓာတ်ပုံပြခန်း) နဲ့တွေ့ဆုံ
TCDD တီထွင်မှုနှင့်အတူခကျြမီးရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း:3နှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတိုးတက် TCDD နှင့်အတူခကျြမီးရထားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ACRI) အဖွဲ့ဝင်များကဇွန်လထဲမှာတူရကီအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအရှိဆုံးအသေးစိတ်လမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခွင့်အလမ်းများဆွေးနွေးရန်အစည်းအဝေး geldi.i [ပို ... ]
ဇယား Pegasus ပရာ့ဂ်မြို့တော်တွင်စတင်ပျံသန်းရန်
Pegasus ပုံပြင်စီးတီး Praga ပျံသန်းဖို့စတင်: ပျံသန်းမှုကွန်ရက်က Pegasus လေကြောင်းလိုင်းချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်လေဆိပ် Sabiha Gokcen အစ္စတန်ဘူလ်ကနေဇွန်လ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကနေ 19 ပရာ့ဂ် 39,99 ယူရို စတင်. ဈေးနှုန်းများနှင့်အတူပျံသန်းဖို့စတင်နေကြသည်။ Pegasus "Fairy Tales စီးတီး" [ပို ... ]